Hevitry ny rano amin'ny rano amin'ny nofy rano ao amin'ny Baiboly - Hevitry Ny Baiboly
Ahoana ny fomba hamerenana ny ringer amin'ny iphone 6
inona no hatao rehefa tsy hivadika ipad anao
fanampiana avy amin'ny governemanta hividianana trano voalohany 2019
manana antso wifi ve ny telefaona finday
Hevitry ny rano amin'ny rano amin'ny nofy
Biblical Meaning Water Dreams
Inona no dikan'ny rano amin'ny nofy? Ny rano, tsapako fa maneho ny sehatra ara-panahy. Sarotra ny manome anao interp marina fa tsy misy pitsopitsony momba ny nofy, saingy mino aho fa miroso amin'ny faritry ny fanahy ianao.
Tsy miafina izany zava-dehibe ny rano . Raha tsy misy izany dia maty ao anatin'ny andro vitsivitsy isika rehetra. Noho izany, matetika, ny rano dia manana singa haitao mahery vaika. Imbetsaka, amin'ny endrika orana, dia afaka tandindona zavatra ratsy na manimba izay hitranga. Amin'ny fotoana hafa dia mety hidika ho karazana Batisa izany, izay ahitan'ny toetra amam-panahy karazana fanovana ny toetrany, matetika ho amin'ny tsara kokoa.
Saingy, mitazona rano ve izany (pun intended) raha ny ara-panahy na hevitry ny Baiboly momba ny rano ? Inona marina no dikan'ny rano rehefa hita ao anaty Baiboly izy io? Ny fomba tsara hahalalana, toy ny mahazatra, dia ny fijerena andalan-tsoratra vitsivitsy ary hitsimpona izay lazain'izy ireo.
Jenezy 7:17 Ary ny safo-drano dia niseho ambonin'ny tany efa-polo andro. Ary nitombo ny rano ka nanandratra ny fiara, dia nipaka ambonin'ny tany izy.
Araka ny tantarain'ny Genesis dia nahatsiravina izaitsizy ny fahotan'olombelona ka nalahelo mafy Andriamanitra noho izany. Ho fomba iray na fanadiovana ny ratsy dia nandefa safo-drano izy mba hamafana ny faharatsiana tamin'ny tany, afa-tsy i Noa sy ny fianakaviany ary ny roa amin'ny karazam-biby rehetra. Ny ankamaroantsika dia mahafantatra ity tantara ity amin'ny fony, satria aseho amin'ny bokin'ny ankizy marobe izany ary miaraka amin'ny sarimihetsika malaza miaraka amin'i Russell Crowe.
Na izany aza, misy hevitra vitsivitsy momba ny dikan'ny rano ao amin'ny Baiboly rehefa mamaky ilay andalan-tsoratra izy. Ny rano, eto, dia ampiasaina ho fanadiovana na fanadiovana. Toa ratsy izy io, satria manimba tokoa, nefa nampiasaina mba hanadiovana ara-bakiteny ny tany hiala amin'ireo zava-dratsy sy tsy masina rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny rano dia mandray an'izany.
Jaona 4:14 fa na iza na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay.
Ankoatry ny tandindona karazana fanadiovana sasany dia manondro fahafaham-po sy fiainana koa ny rano. Izany indrindra no antony iantsoana an'i Jesosy hoe rano velona, ​​izay tsikaritra amin'ity andalana ity. Nilaza tamin'ny vehivavy izy fa rehefa manatona azy ny olona dia hanana fahafaham-po tanteraka ary tsy hangetaheta zavatra hafa amin'ny fiainana mihitsy.
Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa misotro rano ara-batana ny olona iray dia mila bebe kokoa ny fivelomany. Miaraka amin'i Jesosy anefa dia omena ny fahafenoana. Ka ny rano dia afaka manondro fahafaham-po sy fiainana, izay fomba hafa iray hafa ilazana ny tandindon'i Jesosy!
Asan'ny Apôstôly 8: 36-38 Ary raha nandeha teny amoron-dalana izy ireo, dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa: ‘indro, misy rano. Inona no manakana ahy tsy hatao batisa? 'Ary hoy Filipo:' Raha mino amin'ny fonao rehetra ianao, dia mety. 'Ary namaly izy ka nanao hoe: Mino aho fa Jesosy Kristy dia Zanak'Andriamanitra. Dia nasainy ny kalesy Mijanona tsara. Ary nidina tany anaty rano i Filipo sy ilay tandapa, ary nataony batisa izy.
Ny rano no mpanelanelana amin'ny fanaovana batemy, ary tena mety tokoa. Koa satria ny rano dia afaka maneho ny fanadiovana sy ny fiainana, dia tonga lafatra raha ampiasaina amin'ny batisa. Rehefa vita batemy ny olona iray dia asitrika ao anaty rano mandritra ny iray segondra, ary miverina avy eo. Ny fizotrany rehetra dia maneho fanehoana ivelany ny tena sandany anaty; ilay olona dia manambara ampahibemaso fa manana fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy izy ireo.
Ny ota sy ny hadisoana taloha rehetra dia maty (tandindona amin'ny fampidobohana ao anaty rano ilay olona) ary avy eo atsangana amin'ny fiainam-baovao (an'ohatra amin'ny fiakarana ilay olona miakatra avy amin'ny rano). Fanehoana ny zavatra niseho tao am-po izany; fanadiovana tanteraka sy fiainana vaovao.
Noho izany, ny rano dia manondro an'i Jesosy amin'ny fomba maro. Izy io dia tandindon'ny fanadiovana izay azon'i Jesosy omena, fiainana vaovao natolotr'i Jesosy, ary ampiasaina amin'ny Batisa hanehoana ny fanekena an'i Jesosy sy ny fandavana ny tena. Mampiseho an'io koa ny Testamenta Taloha; tsy miankina amin'ny teolojia Testamenta Vaovao ihany izy io.
Ny tiana esorina anefa dia ny rano dia manao asa tsara tokoa amin'ny fampandrenesana an'i Jesosy, izay milaza fa izy ilay Rano velona. Izy, ary Izy irery ihany, no afaka mamono ny fanahy mangetaheta eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny zava-misy fa ny rano dia ampiasaina amin'ny fomba an'ohatra sy mahery ao amin'ny Soratra Masina mba hanampiana antsika fotsiny haneho amintsika ny fomba nanoratra azy tamin'ny fomba kanto sy ny fahagagana nataon'i Jesosy!
Famakafakana ny rano amin'ny nofy
Ao amin'ilay ohatra etsy ambony, ilay mpanonofy dia tsy tratry ny onja misamboaravoara. Mijery azy ireo avy ao ambadiky ny varavarankely fitaratra miaro azy ireo izy. Raha ny marina dia manana nofy maro izy izay mandinika ny rano nefa tsy manakaiky azy. Toa olona mahatsikaritra ny fihetseham-pony mikorontana io saingy tsy te-hijery ny dikan'izy ireo.
Miankina amin'ny habetsaky ny rano, ny fihetsiky ny rano ary ny halaviran'ny mpanonofy amin'ny rano, azo atao ny manonofinofy ny dikany ilay mpanonofy ary mianatra izay lazain'ny nofinofy azy.
Fanontaniana ho an'ny fandikana nofy
Rehefa manonofy momba ny rano ianao dia ezaho tadidio ny valin'ireto fanontaniana manaraka ireto. Mety hanampy anao hahita ny lesona manantitrantitra ny psyche anao izy ireo.
* Karazan-drano nanonofy inona ianao? Ny rano be dia be dia afaka maneho ny fihetseham-po lalina, raha ny fandehanan'ny orana kosa dia mety hanondro ny fanadiovana.
* Inona no fihetsiky ny rano tao amin'ny nofinao? Ny rano mikorontana dia afaka manome fihetseham-po mikorontana. Ny rano feno fotaka na manjavozavo dia mety maneho ny fahatsapana hafangaro na tsy mazava.
* Ahoana ny halaviranao na ny fihetsikao manoloana ny rano? Raha very na rendrika ao anaty ranomasina ianao dia mety hahatsapa ho tototry ny fihetsem-po. Ny fitazonana ny elanelana azo antoka amin'ny onja misolampy dia mety haneho fihetseham-po izay tsy voalamina.
* Manao ahoana ny fihetsem-ponao ankehitriny? Inona no eritreritra vaovao tonga tao an-tsainao?
* Mampiseho inona aminao ny nofy momba ny rano?
Karazana nofy tafiditra anaty rano
Betsaka ny fomba manonofinofy momba ny rano. Indraindray ny mpanonofy dia matahotra an'io, miteraka nofy ratsy, fa amin'ny fotoana hafa dia traikefa nahafinaritra izany, ary niafara tamin'ny nofinofin'ny fahalalahana sy ny fikarohana. Ireto ohatra nofinofy roa manaraka ireto dia mety hanome fanampiana ho an'ny fandikanao manokana.
Tototry ny ranomasina
Mivoaka any an-dranomasina ianao, mitsingevana eo ambony vatan-kazo kely irery. Ny onja dia lava noho ny mahazatra, ary matahotra ianao sao ho tonga tampoka ny lakaly.
Tampoka teo dia nisy onja mahery vaika nisamboaravoara ary nandrahona ny hanafotra anao. Matahotra be atelin'ny ranomasina ianao, mifoha amin'ny fiandohana.
Ny ranomasina midadasika - miaraka amin'ny rano lalina ao aminy, ny fisondrotan'ny ranomasina ary ny fihenan'ny ranomasina ary ny zava-manan'aina an-dranomasina miafina - dia mety ho toerana azo ianteherana irery. Mitsingevana eny ambonin'izany rehetra izany, eo amin'ny lakandrano marefo, tsy mahagaga raha matahotra ny mpanonofinofy fa mety tonga tampoka amin'ny fotoana rehetra izy. Miharatsy hatrany ny raharaha rehefa misy onja mahery vaika miforona ary manakaiky ary manambana ny ainy.
Ny fehezan-teny natelin'ny ranomasina dia mampiseho ny endrika lanin'ny rano be loatra. Rehefa sendra ao anaty ranomasim-pahoriana ny olona dia mazàna izy ireo mahatsiaro ho tsy afa-manoatra amin'ny toe-javatra manambana ny hamono azy ireo.
Amin'ny endriny tsotra indrindra, ity nofinofy ity dia mety ho fanoharana amin'ny fihetsem-po mandrahona ny hanafotra ilay mpanonofinofy amin'ny toetrany mifoha - indrindra satria zana-kazo kely fotsiny no entiny. Satria ny onja-dranomasina dia azo inoana fa tandindon'ny fikorontanana ara-pientanam-po, ny mpanonofy dia mety mahatsapa fihetseham-po lehibe.
Raha nilomano namakivaky ny onja ilay mpanonofy, na nahita ny tenany tao anaty sambo mahery, dia mety hanome fanazavana ny fomba fiatrehany ny fihetsem-pony izany. Amin'ity tranga ity, na izany aza, ny onja dia mahery noho ny mahazatra ary matahotra izy amin'ny onjan-dranomasina manakaiky. Indraindray, ny tahontsika dia mahatsapa ho lehibe noho ny zava-misy; ny manonofy dia mety tsara raha tsy mamela ny toe-javatra misy ahiahy ankehitriny handevona ny eritreriny sy ny fihetseham-pony.
Anaty rano sy miaina
Eo afovoan'ny filomanosana amin'ny tionelina anaty rano ianao ary mihazona ny fofonainao dia lasa sarotra kokoa. Rehefa mieritreritra ianao fa tsy haharitra faharoa hafa intsony, dia miaina fofonaina lalina. Afaka miaina anaty rano ianao! Rehefa mivoaka avy ao amin'ny tionelina ianao dia manapa-kevitra ny hilomano malalaka any an-dranomasina ary hijery azy io amin'ny fahafinaretana.
Nofinofy mahafinaritra izany, ary mitondra tandindona. Ilay mpanonofy dia manomboka mitazona ny fofonainy satria tsy mieritreritra izy fa afaka miaina anaty rano. Mety ho izany no tsapan'ny olona maro rehefa manakaiky fifanandrinana, fihaonana tsy ampoizina na toe-javatra sarotra izy ireo. Tsy fantany izay hitranga, mampihetsi-po ny fihetsem-po, mandroso izy ireo, mitazona ny fofonainy.
Tapa-kevitra ny hanonofy ilay mpanonofy - maka aina izy satria tsy misy safidy hafa. Gaga izy fa afaka miaina. Ary ny fahatsapana ny fahalalahana omena azy io dia mandefa azy amin'ny traikefa anaty rano, afaka milomano, milalao ary mizaha.
Ireto nofinofy anaty rano ireto dia manondro fa ny nofinofy dia tototry ny fihetsem-po, hoy i Richmond. Koa satria afaka miaina anaty rano izy dia mahazo aina amin'ny fiainam-pihetseham-po sy ny fihetsem-po.
Na nofy izany na nofy ratsy, ny fisian'ny rano amin'ny endriny rehetra dia afaka manondro ny fomba itondrantsika ny fahatsapantsika tsy mahatsiaro tena (na mahatsiaro tena). Amin'ny alàlan'ny fanovozana ao amin'ireo tahirin-tsaintsika lalina indrindra dia afaka mianatra fomba vaovao hifandraisana isika, izay mety hitarika amin'ny fitomboana sy ny fahalalahana.
Ny mpanonofy izay misoroka ny fanatonana ny rano dia mety hahatsapa ho ampitahorina amin'ny fihetsem-po lalina ary hisoroka ny fifandraisana akaiky amin'ny ora fatoriany. Ny lakileny eto dia ny manakaiky ny rano - raha tsy mivantana ao anatiny. Na mifoha na matory, ny famelana ny fihetseham-po tsy mahazo aina eo am-pandehanana amin'ny toe-javatra somary lalindalina kokoa dia hanome traikefa vaovao. Misy ny mety haratra, fa misy ihany koa ny valisoa mety ho tonga miaraka amin'ny tena maha-akaiky anao.
Ny nofinofin'ny rano manadio, mamono na manome traikefa nahafinaritra dia afaka mahatsapa fanafahana. Ny ankamaroan'ny vatan'olombelona dia vita amin'ny rano ary, raha tsy misy izany dia tsy afaka miaina ny olombelona. Rehefa mahatsapa fahafinaretana ao anaty rano ny mpanonofy dia azo inoana fa mifandray amin'ny fomba mahasalama amin'ny fanahiny sy ny fanahiny izy ireo.
Ny nofinofy momba ny rano dia mampatsiahy antsika fa ny fihetsem-pontsika dia hery iray lehibe tokony hizahana. Izy ireo dia afaka manokatra ny fiainantsika amin'ny traikefa voajanahary lalindalina kokoa, na afaka mandrahona ny hanafotra antsika izy ireo raha avela tsy misy mpiambina. Ny vaovao tsara dia, manaitra toy ny nofinofin'ny rano, manaitra antsika amin'ny ampahany amin'ny tenantsika izay misokatra amin'ny fikarohana sy ny fitomboana izy ireo.
Amin'ny manaraka ianao manonofy momba ny rano, mitsambikina! Rehefa mifoha ianao dia diniho ny fiteny nofinofisinao ary tadiavo hoe inona ny fanamby vaovao miandry anao.